Pyae Phyo (MMiTD): December 2014
Internet Download Manager621 Build 17 + Crack
Internet Download Manger ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် 6.21 Build 17
လေးကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ Full Version ဖြစ်
အောင်လုပ်နည်းလေးကိုတော့အောက်မှာ Video လေးနဲ့ပြထားပါတယ်အားလုံး
အမျိုးအစား: Download Manager
နှစ်သစ်မှာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ဦးလေးကြီး လက်ဆောင်
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီး နှစ်သစ်မှာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက်
မြန်မာapkလေးနဲ့ဖြတ်သန်းသွားဖို့ 
ဖုန်းမလာပါနဲ့ apkလေးတခု ဦးလေးကြီး လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီapkလေးရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကတော့ ခပ်လန်းလန်းမီန်းကလေးတယောက်ကို
ထိုင်ငေးနေသလိုမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်နော် ဘာလိုလဲဆိုတော့
မိမိဖုန်းကိုတခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကို ပိတ်ပင်ထားပြီး ဖုန်းမလာအောင်
ချုပ်ကိုင်ထားပါတယ် ဒီကောင်းလေးရဲ့ အားသားချက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို
မိမိဖုန်းထဲမှာမှတ်သားထားတဲ့ဖုန်းများအကုန်လုံးကိုမလာအောင်ပြုလုပ်လိုရခြင်း
ဘယ်ဖုန်းပဲခေါ်ခေါ် ဖုန်းအားလုံးကို မလာအောင်ပြုလုပ်လိုရခြင်း
messageပို့ လိုမရအောင် ပိတ်ထားလိုရခြင်း
ဘယ်သူပဲmessageပို့ ပို့-ပို့ လိုမရအောင် ပိတ်ထားလိုရခြင်း
Notification သတိမပေးအောင် လုပ်လိုရခြင်း
တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကိုပဲ messageပို့ လိုမရအောင် လုပ်လိုရခြင်း
မိမိက ဥပမာ ဘယ်ဖုန်းပဲခေါ်ခေါ် ဖုန်းအားလုံးကို မလာအောင်ပြုလုပ်ချင်းရင်တော့
အမှန်ခြစ်ပေးပါ စသည်ဖြင့် သင့်ကိုယ်တိုင်းလုပ်ဆောင်လိုရပါတယ်
Downloads link 4ခုချပေးထားပါတယ် မိမိနှစ်သက်တဲ့Downloads link
free Downloads link ဖုန်းမလာပါနဲ့ apk
ရဲရင့်အောင်----သဝေထိုး ခကွေး ယပင့် (New Alblum)
ဒီနေ့ တော့ ရဲရင့်အောင်ရဲ့သဝေထိုး ခကွေး ယပင့် Alblumလေးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
Track 11ပုဒ်ပါပါတယ် အားပေးချင်းရင်တော့
ရဲရင့်အောင်ရဲ့မူရင်းခွေလေးကိုအားပေးကြပါလိုဦးလေးကြီးတောင်းဆိုပါတယ်
ဒါပေမယ့် အကြောင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဝယ်မရတဲ့ မိတ်ဆွေများကတော့
သဝေထိုး ခကွေး ယပင့် Alblumကို ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
ရဲရင့်အောင် New Alblumလေးကို မိတ်ဆွေတုို့ 
5.better than me
8.Kiss Me Quick
ဖုန်းလာရင် တစ်ဖက်လူက ပြောသမျှတွေကို မှတ်သားထားပေးမဲ့ Automatic Call Recorder Pro လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
play store မှာတော့ $6.99 နဲ့ရောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်
file size 3.5MB ရှိပြီး android 2.3 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Version : 4.03 + Patched
Automatic Call Recorder Pro ကိုအောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါ
ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ခဲ့ပေးပါ
အမျိုးအစား: Android applications , Android recorder , Tools
♪ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Gmail အသုံးပြုခွင့် ပြန်လည်ရရှိ ♫
တရုတ်နိုင်ငံတွင် လေးရက်ခန့် Gmail ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါတွင် အဆိုပါ email ဝန်ဆောင်မှု ကိုအနည်းငယ် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Google ၏ e-mail ဝန်ဆောင်မှုသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း အနည်းငယ် ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့် ရနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ Transparency အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Gmail ပြန်လည် အသုံးပြုခွင့်ရခြင်းကို Financial Times သတင်းစာက စတင်သတိပြုမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Gmail လေးရက်ကြာခန့် ပြတ်တောက်မှုအပြီးတွင် မေးခွန်းများစွာ ကျန်ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်အခြေစိုက် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အဖွဲ့အစည်း Greatfire.org က Gmail ပြတ်တောက်မှုမှာ အစိုးရတွင် တာဝန်ရှိနိုင်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
Google က Gmail ပြတ်တောက်မှုတွင် ကုမ္ပဏီ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များ မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း CNET သို့ပြောကြားထားသည်။ ထို့အပြင် တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Gmail ပြတ်တောက်ခြင်းကို ဂရုမပြုမိကြောင်း Reuters သို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
Google သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ပြဿနာများစွာနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လက ၂၅ နှစ်မြောက် တိန်အန်မင်ရင်ပြင် အရေးအခင်းမတိုင်မီတွင်လည်း တရုတ်အာဏာပိုင်များက browser များ၌ Gmail အသုံးပြုခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သေးသည်။ ယခုအခါ လေးရက်ကြာ Gmail ပြတ်တောက် မှုတွင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Microsoft ၏ Outlook သို့မဟုတ် Apple ၏ email client မှတဆင့် Gmail ကို အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: Gmail , နည်းပညာသတင်း , အင်တာနက်သတင်း
♪ Samsung Galaxy Note Edge အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ ♫
မိုဘိုင်းဈေးကွက်မှာ နာမည်ရှိတဲ့ Super AMOLED နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ဖုန်တီးထားတဲ့ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကို Samsung Galaxy Note Edge မှာ ပါရှိမှာဖြစ်ပြီး Samsung ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အသွင်နဲ့ Note Edge ရဲ့ Design ဟာ သုံးစွဲသူအများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘေးဘောင်သွယ်ဝိုက်နေတဲ့ ပုံစံ မျက်နှာပြင်ကို အသားပေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး တစ်မူထူးခြားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Qualcomm Snapdragon 805 processor ပါဝင်တာမို့ ဖုန်းအတွက် အလုပ်ကောင်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy Note Edge ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ Note4ထက်အနည်းငယ်မျှ သေးငယ်သော်လည်း ဘေးဘောင် သွယ်ဝိုက်နေတဲ့ အနေအထားဒီဇိုင်းကြောင့် လူအများရဲ့ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းကို ခံနေရပါတယ်။ မျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး အရောင်အသွေး စုံလင်အောင် ပေးစွမ်းနိုင်တာတွေက Samsung ရဲ့ အားသာ ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး သုံးစွဲမှုအပိုင်း အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေး ထားဖြစ်ပါတယ်။ Screen အရွယ်အစား ကြီးမားပြီး သုံးစွဲရခက်ခဲမှုမရှိအောင် Samsung Note Edge ကို လက်နှစ်ဖက်လုံး ကိုင်တွဲအသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Note Edge ရဲ့ ကျောဘက်ကို Leather Coating နဲ့ ဒီဇိုင်းအရလှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေအောင်တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ အခြား Samsung ရဲ့ စမတ်ဖုန်းများနဲပ မတူညီတဲ့အချက်ကတော့ Note Edge ရဲ့ Power/Lock Button ကို ဖုန်းရဲ့ ညာဘက်အပေါ်နားမှာ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမှာ အရင် Note4ရဲ့မျက်နှာပြင် 5.7 လက်မထက် 0.1 လက်မနည်းတဲ့ 5.6 လက်မ display ဖြစ်ပြီး ရုပ်ထွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ 1600 x 2560 pixel ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဆင့်မြင့်မျက်နှာပြင် သိပ်သည်းဆ 524 ppi ပါရှိပြီး Gorilla Glass 3နဲ့ စင်းရာခြစ်ရာတွေမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Flashlight, Voice Recorder, Timer, Rules စတဲ့ app တွေလွယ်ကူစွာအသုံးပြုဖို့ Edge Windows ကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Fingerprint sensor နဲ့ S Pen Stylus features တွေကိုလည်း ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဘေးဘောင်သွယ်ဝိုက်ပြီး သီးခြား Display တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်တာက ထူးခြားချက်လို့ ဆိုနိုင်ပါါတယ်။
Galaxy Note Edge မှာ Android 4.4.4 (KitKat) version ပါဝင်ပြီး Google ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Android 5.0 (Lollipop) ကိုပါ မြှင့်တင်အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 5.6 လက်မ QHD display နဲ့ 16MP rear camera ကို ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး 4K video တွေ ရိုက်ကူနိုင်ပါတယ်။ Frontcamera က Full HD 1440p ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်မယ့် 3.7 MP ပါဝင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင် Curved section မှ shortcut များကိုပါ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံဝါသနာပါသူများ အတွက် အသုံးဝင်စေပါလိမ့်မယ်။
Qualcomm Snapdragon 805 chipset ကို သုံးထားပြီး Qual-core 2.7GHz Krait 450 clock speed နဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် စွမ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ RAM 3GB ကို ပြည့်ပြည်၀၀ အသုံးပြုလို့ ရအောင် ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Memory storage ကို 16GB နဲ့ 32GB (၂) မျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပြီး micro SD နဲ့ 128GB ထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ Li-Ion 3000mAh Battery သုံးစွဲပေးထားပါတယ်။
♪ Professional Design သမားများအတွက် - Corel Multi Product Keygen ♫
CorelDRaw ဆိုတာကတော့ နာမည်ကြီး Design ဆွဲတဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Design နဲ့ပတ်သက်လာရင် Professional အထိ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တာကတော့ Corel မှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Version ပေါင်း 22မျိုး နဲ့ ၄င်းတို့အတွက် Keygen များပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိလိုချင်တဲ့ Version တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး Trial Version အနေနဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူ လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ Keygen ကိုဖွင့်ပြီး မိမိ အသုံးပြုမယ့် Version ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ နောက်ပြီး License အတွက် Serial Key ကို Generate လုပ်လိုက်ပါက Serial Key ရရှိလာပါလိမ်မယ်။ အဆိုပါ Serial Key ကိုအသံးပြုပြီး Full Version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီဗျာ။ Keygen ကိုအသုံးပြုပြီး License ထည့် သွင်းရာမှာတော့ Internet Connection ကိုပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ Windows XP , Vist ,7, 8/8.1 (32-bit or 64-bit editions) စတဲ့ OS အားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Corel Multi Products Keygen + Serial Keys Includes Products:
How to Use Corel Multi Products Keygen + Serial Keys?
Install CorelDraw product (Trial)
Disconnect your internet connection->Start Presentations (choose register later), In Help Menu Click Buy Now Choose Purchased by Phone
Use the keygen to generate your serial number
Copy your installation code into keygen and generate your activation code, copy it back into Corel Activation Window
CorelDRAW Graphics Suite All Version Trial
အမျိုးအစား: Design , Graphic Design
♪ ချောမောလှပသောပုံများရိုက်ယူနိုင်တဲ့ - Beauty Camera v2.023 Apk ♫
ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပြီး FB ပေါ်သို့တင်တက်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် Beauty Camera နောက် ဆုံးထွက် Version လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့အဓိကကောင်းကွက်ကတော့ မိမိရဲ့မျက်နှာ မှာရှိတဲ့ အမဲစက်လေးတွေ ၊ ၀က်ခြံတွေ ၊ အမာရွတ်လေးတွေကို ညီညာချောမွေ့နေအောင် မိတ်ကပ်လိမ်း ထားသလိုမျိုး လှပသောရုပ်ထွက်နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း ပြုပြင်နိုင်သလိုပဲ ရိုက်ထားပြီးသား ဓါတ်ပုံများကိုလည်း ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ပုံရဲ့အလင်အမှောင်စတာတွေကိုပါ လိုအပ် သလိုချိန်ညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Beauty Camera နဲ့သာရိုက်ယူလိုက်မယ် ဆိုရင် သင့်ရဲ့ပုံဟာ နဂိုထက် ကိုပိုပြီးထူးထူးခြားခြားလှပနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးရင်လည်း facebook, twitter, email စတာတွေကို တိုက်ရိုက် Share နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
DiskDigger Pro v0.998-2014-11-1
ဖုန်းထဲက မှားဖျက်မိတဲ့ photo, document, music, video အစရှိတဲ့ ကောင်တွေကို recover လုပ်ပြန်ယူလို့ရတဲ့ DiskDigger Pro version လေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီကောင်လေးကိုတော့ root ရှိတဲ့ ဖုန်းများမှာသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
file size 378.7KB သာရှိပြီး android 2.2 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Size : 378.7KB
Version : 0.998-2014-11-1
DiskDigger Pro ကိုအောက်မှာဒေါင်းပါ
အမျိုးအစား: Android Application , Android recovery , Android system tools , Tools
Chariot ဇာတ်ကား မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေး ကြည့်ချင်းသူများအတွက် မြန်မာစာတန်းထိုးပေးထားပါတယ်။
ဖုန်းထဲက ဒေါင်းချင်းတာကိုဒေါင်းရန်-Download Manager for Android Version4.42.12011 apk
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောAdvanced Download Managerတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Android User များအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ DownloadManager Pro v.4.0.2 For Android လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဖုန်း နဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများအတွက် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမယ့် app လေးတခုပါ။မိမိစိတ်ကြိုက် Link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဒေါင်းနိုင်သလို၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည့်အချိန်တွင်လည်းဒီapp လေးကAutorunပေးပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: Android For Downloadmanager
♪ Techspace Journal Vol (3), Issue (39) (30.12.14) ♫
Techspace ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ်အင်္ဂါ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Techspace ဂျာနယ်ကို ဖတ်ချင်သူများအတွက် မူရင်းဆိုဒ်ကနေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Techspace ဂျာနယ် ၀ယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Techspace Journal Vol(3), Issue (39) ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 30-Dec ရက်နေ့ထွက်လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေ ရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
♪ Snapdragon 810 Processor တပ်ဆင်ထားတဲ့ Samsung Galaxy Note4လာမည် ♫
Samsung က သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Note4စမတ်ဖုန်းကို အဆင့်မြှင့်ပေးတော့မှာပါ။ Samsung က ပိုမိုလျှင်မြန်တဲ့ Processor တပ်ဆင်ထားတဲ့ Note4ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ရောင်းချပေးမယ့် အစီအစဉ် ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Note4မှာ 805 ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Qualcomm Snapdragon 810 Processor ထည့်သွင်းပေးမှာပါ။ Snapdragon Chip တွေကို Apple ဖုန်းမဟုတ်တဲ့ စမတ်ဖုန်ုးတော်တော်များများမှာ တပ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ Note4ဟာ 810 ကို တပ်ဆင်မယ့် ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်လာမှာပါ။
Chip အသစ်ဟာ Note4ကို ကြိုးမဲ့ 4K Video များကို ထုတ်လွှင့်စေနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ဂိမ်းကစားရာ မှာလည်း ဂိမ်းစက် အရည်အသွေးအတိုင်း ခံစားနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် Note4ကို အိမ်သုံးပီစီတစ်လုံး လိုတောင် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Note4အသစ်ဟာ LTE ဆက်သွယ်မှုကိုလည်း အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သာမာန် LTE ထက် လေးဆမြန်တဲ့ 4G LTE-A ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
♪ Trackpad နှင့် Physical Keyboard ပါသော BlackBerry Classic ကို ကြေညာ ♫
BlackBerry က ဒေါ်လာ ၄၄၉ တန် Classic စမတ်ဖုန်းကို ကြေညာလိုက်ပါသည်။ Classic တွင် ၃.၅ လက်မ 720p ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို Gorilla Glass3ဖြင့် ကာကွယ်ထားပါသည်။ Dual-Core 1.5GHz Processor, 2GB RAM , 16GB Storage, 8MP Rear Camera, 2MP Front Camera ပါရှိပါသည်။
Classic ၏ အဓိက စွမ်းဆောင်ချက်မှာ Row လေးခုပါရှိသော QWERTY Keyboard နှင့် Trackpad ဖြစ်ပါ သည်။ BlackBerry က Trackpad ကို Classic တွင် ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ BlackBerry 10.3 OS ကို ထည့်သွင်းထားပြီး Amazon App Store မှ Android Apps များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
♪ Gionee Elife S5.1 ရဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် ၊ နည်းပညာ ၊ ဒီဇိုင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်မျာ။ ♫
S 5.1 ဟာပုံစံ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှုတဲ့ ပုံစံမျိုး ရှိနေပါတယ်။ လေးထောင့်ဆန်ဆန် ပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားပြီး အရွယ်အစား ပိုင်းကလည်း ကြီးမားလွန်းခြင်း မရှိပါဘူး။ ဖုန်းကိုယ်ထည် ရဲ့ ဘေးဘောင် ဟာ သတ္တုကိုယ်ထည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ပုံစံဖြစ်ပြီး နောက်ဘက် ကာဗာကတော့ ပလတ်စတစ် ကာဗာပုံစံမျိုး ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် Groilla Glass နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အတွက် နောက် ဘက်ကာဗာဟာလည်း ရှေ့မျက်နှာပြင်လိုပဲ ပြောင်လက်နေတဲ့ မြင်ကွင်းပုံစံမျိုးကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Gionee Elife S 5.1 မှာတော့ Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 CPU ကိုအသုံးပြု ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖုန်းကို အသုံးပြုချိန်မှာ မြန်ဆန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို ထိတွေ့ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဂရပ်ဖစ် စနစ်အတွက်လည်း Mali-450MP4 GPU ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ဂရပ်ဖစ် စနစ်ပိုင်းမှာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖုန်းမှတ်ဥာဏ် အတွက်တော့ Internal Memory 16GB ပါဝင်ပြီး RAM ကတော့ 1GB RAM တွေဖြစ်တဲ့အတွက် မှတ်ဥာဏ်ပိုင်းမှာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှတ်ဥာဏ်ထပ်တိုး အသုံးပြုဖို့ အတွက်တော့ Card Slod မပါဝင်တဲ့အတွက် Micro SD Card ထပ်စိုက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ Android OS Version 4.4.2 ကိုအသုံးပြုထားပြီး မြန်မာစာ စနစ်ကလည်း ဖုန်းထဲမှာ System Font တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင် လာတဲ့အတွက် ဖုန်းတစ်ခုလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ စနစ်အားလုံးကို မြန်မာလို မြင်တွေ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာကတော့ ရှေ့ကင်မရာမှာ 5Mega Pixel ရှိတဲ့ကင် မရာကို တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီး နောက်ကင်မရာ ကတော့ 8Mega Pixel ကင်မရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကင်မရာ စနစ်ကလည်း မြင့်မားပါတယ်။ USB 2.0, Bluetooth 4.0 စနစ်တွေ ပါဝင်ပြီး Screen ကတော့ AMOLED Screen ကိုအသုံးပြု ထားတာကြောင့် ကြည်လင် ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ် ထွက်မြင်ကွင်းတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Screen Pixel တွေအနေနဲ့ 720x1280 Pixel ထိရရှိ နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုထားတဲ့ ဘက်ထရီကတော့ Li-Ion 2050 mAh ဘက်ထရီပါ။
ဖုန်းတစ်ခုလုံး ကိုခြုံငုံသုံးသပ် ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ Hardware စနစ်ပိုင်းတွေဟာ ကောင်းမွန်ပါ တယ်။ ဖုန်းကိုကိုင်တွယ် အသုံးပြုချိန်မှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ထိတွေ့မှုကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အရွယ်အစား ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ အလေးချိန် ပေါ့ပါးခြင်း ပါးလွှာခြင်းတွေဟာ သုံးစွဲသူတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာ ဖြစ်မှာပါ။ ကင်မရာ စနစ်ပိုင်းမှာလည်း စုံလင်တဲ့ စနစ်တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံ ဝါသနာရှင်တွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေစေ နိုင်ပါ တယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း နည်းပညာမြင့် စမတ်ဖုန်း တစ်ခုအနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ မှတ်ဥာဏ် ပိုင်းမှာလည်း Memory Card ထပ်စိုက်ပြီး အသုံးပြုလို့ မရပေမယ့် Memory Card နဲ့ Stick တွေကို ဖုန်းမှာ အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် USB Connector ပါဝင်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာ သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ bass အသံကောင်းကောင်းလေးနဲ့ နားထောင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Bass Booster Pro Version လေးဖြစ်ပါတယ်
play store မှာတော့ ပိုက်ပိုက်နဲ့ရောင်းပါတယ်
ဒါ့အပြင် သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ Equalizer တွေကိုလည်း ချိန်ညှိလို့ရပါသေးတယ်
တစ်ခုတော့ရှိတယ် နှားကြပ်တပ်ပြီးမှ နားထောင်မှ bass အသံကိုကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
✓ Widget available for the three effects (bass boost,virtualizer and equalizer)
Bass Booster PRO - Music EQ ကိုအောက်မှာဒါင်းပါ
ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေFacebook ကနေယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ခဲ့ပေးပါ
အမျိုးအစား: All applications , Android booster , Music & Audio
♪ Zip ဖိုင်​လုပ်​ချင်​သူများနှင့်​ ​ဖြေချင်​သူများအတွက်​ Rar For Android
Zip ဖိုင်​​လေး​တွေ​လုပ်​ချင်​သူများ (ဒါမှမ​ဟုတ်​) Zip ဖိုင်​​ဖြေဖို့အခက်​အခဲရှိ့​နေသူများအတွက်​ Rar For Android ဆိုတဲ့ Apk ​လေးတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ။
တချို့ဆိုဒ်​​တွေက Software ​လေး​တွေကို Zip ဖိုင်​အဖြစ်​ ချုံ့ပီးတင်​​လေ့ရှိ့ပါတယ်​ ။ Users ​တွေက Down ​​တော့ Apk ကို Zip ဖိုင်​အဖြစ်​ရလာ​တော့ အချိန်​ကုန်​ခံပီး
သာ​ဒေါင်းရတယ်​ ​ဆော့ဝဲလ်​ ​တွေက သုံးလို့လဲမရဘူး
လို့​ပြော​သံ​တွေကြား​နေရပါတယ်​ ။ သုံးမရတာမဟုတ်​ပါဘူး ကိုယ်​အသုံးမကျတာပါ ။ ရလာတဲ့ Zip ဖိုင်​ကို​ဖြေ
လိုက်​ရင်​ Apk ​လေး​တွေကို Folder တစ်​ခုထဲမှာစုစု
စည်းစည်းမြင်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ ။ ​
ကျ​​နော်​တင်​သမျှကို Facebook က​နေတိုက်​ရိုက်​လိုချင်​ရင်​ ကျ​နော့်​ Page ​လေးကို Like နှိပ်​​ပေးခဲ့ပါ
``ကို​နေဇင်​ နည်ပညာ Page´´
▼ December ( 828 )
နှစ်သစ်မှာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ဦးလေးကြီး လက်ဆေ...
♪ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Gmail အသုံးပြုခွင့် ပြန်လည်ရရှိ...
♪ PC မှာ အင်တာနက် Speed ကိုဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ - Du ...
♪ Samsung Galaxy Note Edge အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြခ...
♪ Professional Design သမားများအတွက် - Corel Multi ...
♪ ချောမောလှပသောပုံများရိုက်ယူနိုင်တဲ့ - Beauty Cam...
ဖုန်းထဲက ဒေါင်းချင်းတာကိုဒေါင်းရန်-Download Manage...
♪ Techspace Journal Vol (3), Issue (39) (30.12.14)...
♪ Snapdragon 810 Processor တပ်ဆင်ထားတဲ့ Samsung Ga...
♪ Trackpad နှင့် Physical Keyboard ပါသော BlackBerr...
♪ Gionee Elife S5.1 ရဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် ၊ ...
♪ Zip ဖိုင်​လုပ်​ချင်​သူများနှင့်​ ​ဖြေချင်​သူများ...
Video တွေကို Convert လုပ်ချင်သူများအတွက် အရည်အသွေး...
TaiG Jailbreak Toolလေးနဲ့ iOS 8.1.1 and iOS 8.1.2 ...
Dll-Files Fixer V3.1.81.2919 KEYGEN 100%
နာမည်ကြီး android Photo Editor apk များစုစည်းမှု
မြန်​မာစာကိုမှန်​​အောင်​ထည့်​​ပေးမယ့်​ Huawei Font...
♪ Delta Force Xtreme2PC Game Full Version ♫
♪ သင့်ရဲ့ လုံခြှုံရေးအတွက် Facebook အကောင့်အတုများ...
♪ သင့်ဖုန်းထဲက Application တွေကို Hack နိုင်မယ့် -...
အမြန်လှုပ်ရှာနေတဲ့ ပုံတွေကို မိအောင်ရိုက်ပေးနိုင်တဲ...
<2GB RAM Booster Pro v1.1
2015အတွက် အကြိုလက်ဆောင်အဖြစ်PCသမားတိုင်း အသုံးပြု...
Advanced SystemCare Pro 8.0.3.618 Final + Crack +1...
♪ GSM/ WCDMA အသုံးပြုသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုမြှင့်မ...
♪ လက်အရွယ်အစားသေးငယ်သူများအတွက် iPhone 6s Mini ကို...
♪ Video နဲ့ Music များကိုဖုန်းနဲ့လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဒ...
♪ Computer များအတွက် Driver ပေါင်းချုပ် - SamDrive...
♪ အနောက်ဘက် ကင်မရာနှစ်လုံးပါသည့် Huawei Honor6Pl...
♪ ZTE က အသံဖြင့် ခိုင်းစေနိုင်သော Star2စမတ်ဖုန်...
♪ Facebook က Groups များတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်း...
♪ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီးအင်တာနက်သုံးနိုင်မယ့် - Real...
♪ Eng-Myan Font အလှလေးများသုံးချင်သူများအတွက် Eng...
♪ ပင်လယ်ရေအောက်ကမ္ဘာမှ ငါးအလှလေးများ - aniPet Aquar...
Cameraရိုက်ရာတွင်ကိုယ်ပွားရိုက်တဲ့ Clone Yourself ...
Ringtone Maker v1.0.9
မိမိကိုယ်ပိုင်း ဓာတ်ပုံများကို Application လုပ်နည်...
ရုပ်ရှင်များကြည့်ရန်-MX Player Pro v1.7.35 apk
Android ဖုန်း Tablet အတွက်အရေးကြီးတဲ့-Assistant fo...
Wondershare PDFelement 4.0.0.3 + Crack +100%
မြန်မာပြည်နည်းပညာလောက တိုးတက်ဖို့ သင်ကူညီနိုင်ပြီဆ...
Wondershare Dr.Fone for Android 4.8.2.142 + Patch ...
This is 40(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
♪ အချစ်ဗေဒင်အသစ်လေးလာပါပြီ - Love Astrology v 7.1 ...
Note2GT-N7100Tမှာ -language မြန်မာလိုအသုံးပြုချင...
iOSသမားများအတွက်Plants vs. zombies 2: Big wave bea...
Gunship Counter Shooter 3D v1.2
Hacker တွေ သင့်ရဲ့ password တွေကို ဘယ်လိုရယူနိုင်လ...
DAEMON Tools Pro Advanced 6.0.0.0444 Final Incl. C...
Music Visualizer v1.6.8
Business Card Maker v2.1
♪ မန်းတွင် ပြင်ပမိုဘိုင်း ဆင်းမ်ကတ်ဈေးနှုန်း ကျဆင်...
♪ ခပ်မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းအဆန်းတွေ 3D Effect တွေနဲ့ -...
♪ Samsung Galaxy Mega2ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်များ ♫
Clash of Clansဂိမ်းအတွက် Hackပြီးသား Mod v6.407.2 ...
Huaweiဖုန်းတော်တော်များကို Rootလုပ်ပေးနိုင်တဲ့Ro...
အကို ...Facebook A/C ဖွင့်နည်းတွေ နောက်ထပ်ရှိသေးလာ...
EaseUS Data Recovery Wizard Unlimited 8.6.0 + Keyg...
Facebook ကိုဘယ်လို Hack မလဲ???
ဓာတ်ပုံတွေပိုလှအောင် စက်တင်ချိန်ပြီးပိုလှအောင် ရို...